Sawir qaadayaasha Galician ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Macnaha ugu wanaagsan ee magaca Galician
Iris Gamen | | La cusboonaysiiyay 19/03/2022 00:10 | Fanaaniin
Panorama Isbaanishka, sawirku wuxuu marayaa daqiiqad wanaagsan, meel kasta oo aan eegno waxaan aragnaa dad karti leh oo abuuraya farshaxan, shabakadaha bulshada, dugsiyada, waddooyinka, iwm. Dalkeennu waxa uu ahaa welina sii ahaanayaa hal-abuur hibo leh, waxana aanu doonaynaa in aanu soo bandhigno.
Waa hawl aad u adag, in la soo xulo magacyada dadka hormuudka ka ah adduunka tusaalaynta iyo si gaar ah mawduuca aynu maanta uga hadlayno. Sawir-qaadayaasha Galician. Laga soo bilaabo hal-abuurka khadka tooska ah, waxaan rabnaa hal-abuurka ka jira Galicia inuu gaaro dhammaan qeybaha Isbaanishka iyo sababta aan uga baxsaneyn xudduudahayada.
Farshaxan sawireedku waxa uu inagu gadaaman yahay nolol maalmeedkeena, marar badanna waanu iska indhatiraa, waxa aanu ku aragnaa moodada, suugaanta, xayaysiisyada iyo qaar kale. Laakiin waa in taas la aqoonsadaa Waad ku mahadsan tahay shabakadaha bulshada, sawirada iyo xirfadlayaasha ayaa si adag u garaacay.
1 Sawir-qaadayaasha Galician
1.2 geedka mooska
1.3 Sawirka Celsuis
1.5 Lula Ku raaxayso
1.6 Aby Castillo
1.9 Martin Romero
1.12 Mr Reny
Kala duwanaanshaha sawir-qaadayaasha Galician waa mid aad u ballaaran, oo ay adagtahay in dhamaantood hal qoraal laga wada hadlo, hadaba maanta waxaanu idiin soo gudbinaynaa xul.
Laga soo bilaabo A Coruña, wuxuu ku bartay Farshaxanka Fine ee Jaamacadda Barcelona 2006 wuxuuna fursad u helay inuu wax ku barto simistarka Waaxda Sawirka ee dugsiga MassArt ee Boston. Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimadaas, waxa uu daaha ka qaaday in xidhiidhka ka dhexeeya muuqaalka sida sawirka iyo sheekadu ay tahay waxa uu rabo in uu abuuro.
Hadda, waxay u shaqeysaa sidii sawir-qaade iyo macallin, waxayna isku daraysaa labada weji ee ku jira Mashruuca Pin Tam Pon, kaas oo ay ku horumariyaan agabta waxbarashada ee la xidhiidha male-awaalka, sawirada iyo ciyaaraha.
Sawir-qaadaha ka dambeeya magaca La Platanera waxaa lagu magacaabaa Andrea, oo ka yimid Jasiiradda Arousa. iyada waxa uu ku qeexayaa in uu yahay buundada tooska ah ee dareenka iyo mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loo sheego sheekooyinka. Waxa uu ku abuuray aqoon-is-weydaarsi guriga awoowe, isaga oo kaashanaya hooyadiis, meel bannaan oo uu ka gooyo, tijaabiyo waxna ku barto.
Xardho xardho, waxa uu ku gaadhay farsamo uu sheekadiisa kaga sheekeeyo, iyada oo loo marayo shaabadeynta serigraphy farshaxan qaab farshaxanimo ah oo warqad, dhar iyo dhoobo ah.
Sawir-qaade iyo farshaxan madax-bannaan, oo ku dhashay Ourense. Ardayga sawir-qaadista ee Dugsiga Farshaxanka iyo Farshaxanka. Waxa uu agaasime faneed ka ahaa hay'ado xayeysiisyo iyo istuudiyowyo kala duwan oo Spain ku yaalla, iyo sidoo kale Switzerland, Faransiiska iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Waqtigan xaadirka ah, wuxuu u heellan yahay inuu iskiis u sawiro, oo leh qaab sawireed oo leh sawir muujinaya, wuxuu ku guuleystay inuu abuuro nooc ka mid ah muujinta shakhsi ahaaneed, isku-dhafka isku-dhafka ah iyo khad dhijitaalka ah. Shaqooyinka sawir-qaadaha ayaa si taxadar leh loo daryeelaa, oo uu nolosha ku siiyo makhluuqa cusub, mishiinnada, iwm.
Dea Gómez iyo Diego Omil, Los Bravú, waxay u bixiyeen wadarkooda ereyga Galician ee la xidhiidha duurjoogta. Waxay ku kulmeen Kulliyadda Farshaxanka Fine ee Salamanca, waxayna si wadajir ah u noqdeen halbeeg u ah farshaxanka iyo rinjiyeynta adduunka.
Iyagoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan, labadan fanaan waxay wax ka qabtaan mashaakilaadka casriga ah. Shaqadiisu waxay leedahay shakhsiyad weyn, taas oo ka dhigaysa inuu ka soo muuqdo fannaaniinta inteeda kale. Iyaga, aad bay muhiim u tahay in la bilaabo la shaqaynta sawir-gacmeedyo, sawirro fudud oo ka caawinaya inay ogaadaan waxa gabalku u eg yahay.
Bravú waxay ku soo bandhigeen xarumo farshaxan oo kala duwan sida Matadero oo ku yaal Madrid, Matxafka Farshaxanka Casriga ah ee Salamanca, Cutubka 1 ee London, iwm.
Lula Ku raaxayso
Waxay ku dhalatay Galicia, waxay baratay Farshaxanka Fine halkaas oo ay ku takhasustay rinjiyeynta. Ka dib, waxaan bartay shahaado doctorate iyo master degree ah oo ku saabsan hal-abuurka fanka iyo naqshadaynta iyo sawirka. Waxa uu shaqadiisa ka soo qaaday galleries ilaa waddooyinka, halkaas oo uu doonayay in uu aragti cusub ka bixiyo qoraallada. Qaar badan oo ka mid ah shuqullada farshaxankan ayaa laga heli karaa qaabab waaweyn oo gidaarada ah, halkaas oo ay si fiican ugu habboon yihiin deegaanka magaalada.
Tabartiisu waxay ku faaftay adduunka oo dhan, wuxuuna magac ku yeeshay xafladaha sida North West Walls ee Belgium, Bandhig faneedka Waddooyinka ee Paris, Bandhiga Nishimi ee Asarbayjan, iyo kuwo kale oo badan.
Shaqadiisu waxay u dhaxaysaa rinjiyeynta, sawirista, farshaxanimada dhoobada. Abuuridda dhoobada ayaa siisay fursado kala duwan oo hal abuur leh si uu u siiyo qaab iyo mugga jilayaasha.
Mid kasta oo ka mid ah gabalkeeda waxa ay sitaa nuxurka nafteeda, sida noole nool oo macaan. Mashruuciisa gaarka ah, bahalnimada ayaa si dhow ula xiriirta quruxda, qarsoodiga leh riwaayadaha.
Bachelor of Fine Arts, Sergio Covelo wuxuu isku qeexaa inuu yahay sawir-qaade, sawir-qaade iyo sawir-qaade.
Shaqadiisu waxay ku wareegsan yihiin sawirka buugaagta akhriska, warbaahinta badan iyo majaajilada, kan dambe wuxuu ku sameeyay daabacado warbaahinta sida La Voz de Galicia.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadiisa waxay ku xidhan tahay sawirka warbaahinta badan ee shabakada, sawirada dhaqdhaqaaqa, boodhadhka, animation, iwm.
Alejandro Viñuela waa kan ku gabanaya JANO gadaashiisa, oo ah arday ka qalin jabiyay Farshaxanka Fine iyo arday sawir qaade ah. Waxa uu u shaqeeyay sidii naqshadeeye garaaf, sawir-qaade iyo sawir-qaadis shirkado kala duwan. Dhawaan diirada la saaray sawir majaajillo ah iyo sawir tafatir ah, marka laga reebo inuu bare ka yahay aqoon-is-weydaarsiyada sheeko garaafyada.
Waxay isku daraysaa culuumta Illustrator, agaasimaha animation iyo qoraa buug majaajillo ah si aad u horumariso mashaariicdaada. Dunida sawir-qaadista, wuxuu ka shaqeeyay xayeysiis ilaa daabacid. Qoraaga majaajilada sida The Fabulous Chronicles of the Taciturn Mouse (2011) ama The Debt (2017).
Natalia Rey, ama sida hooyadeed si kalgacal leh ugu yeerto Pirusca. Sawir-qaade iyo naqshadeeye garaaf. Waxay baratay Farshaxanka Fine waxayna ku dhammaatay sidii naqshadeeye garaafyo oo baratay inay is-wax barato.
Pirusca waxay ahayd astaantiisa gaarka ah ilaa 10 sano, waxa uu ku dhashay ujeeddadiisu tahay in la abuuro sawirro si ay kaaga dhigaan dhoola cadeynta iyo ka saarida ubadka aad gudaha ku sido.
Laga soo bilaabo da'dii aad u yarayd, waxay ku xidhnayd adduunka tusaalaynta. Waxay u shaqeysaa joornaalada ama buugaagta carruurta, iyo sidoo kale sawirro la isku dhejiyay. Hadda waxa uu degan yahay fanka Maison des Auteurs de Angouleme halkaas oo uu ka shaqaynayo majaajiliistegiisa xiga.
Javier Ramirez ama Mr. Reny, ayaa inta badan u heellan dunnida sawir-qaadista inkasta oo uu naftiisa ku dhawaaqay inuu aad u jecel yahay qorista iyo naqshadaynta garaafyada. Shaqooyinkiisa, wuxuu isticmaalaa palette midab ballaaran oo wax walbana waxaa ku wareegsan faahfaahin yar. Waxa uu shaqo ka qabtay ololaha xayaysiisyada, daboolida buugaagta, diiwaanada muusiga, iyo kuwo kale.
Sida aad arki karto, liisku wuxuu u muuqdaa mid aan dhammaad lahayn oo waa, halkan waxaan kuugu dhaafnay doorasho yar, tan iyo waxaa jira magacyo badan oo kale oo sawir-qaadayaasha Galician ah oo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in la ogaado si aan ugu raaxaysanno oo aan uga baranno farsamooyinkooda shaqo.
Haddii qof uu u maleeyay in sawir-qaadayaashu ay la waayi doonaan da'da dhijitaalka ah, way khaldanaayeen, isbeddelkan waayaha waxa uu ka dhigan yahay kor u kaca ka mid ah fanaaniinta sawir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Macnaha ugu wanaagsan ee magaca Galician
Waa maxay taariikhda summada Google?
Mabaadi'da Gestalt ee naqshadeynta garaafyada